विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि घोषणा गरेको लकडाउनको मिति वैशाख १५ सम्मलम्बाइएको छ । नागरिकलाई लकडाउनको पालना गराउन नेपाल प्रहरीले देशभरि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । लकडाउनको उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारणमाथि ज्यादती गरेको लगायत विषयमा प्रहरीको सार्वजनिक आलोचना पनि भइरहेको छ । यिनै विषयको सेरोफेरोमा साप्ताहिकका कृष्ण आचार्यले प्रहरी
प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीसँग गरेको कुराकानी :
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन पालना गराउन नेपाल प्रहरी देशैभरि सक्रिय छ । यसका लागि तपाईंहरूले के–कस्ता गतिविधि गरिरहनुभएको छ ?
कोरोना भाइरसबारे आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन हामीले निरन्तर माइकिङ गरिरहेका छौं । हालसम्म देशभरि ४० हजार पटक माइकिङ गरिसकिएको छ । देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रहरीको कन्ट्रोल रुम छ । १०० र त्यहाँको स्थानीय नम्बरहरूमा सहयोगका लागि फोनहरू आइरहेका हुन्छन् । विशेषगरी कोरोना र लकडाउनसम्बन्धी आएका जिज्ञासा मेटाउने र कसैलाई सहयोग चाहिँदासम्बन्धित निकायसँग समन्वयन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । देशभरि हालसम्म कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित साढे २ लाखभन्दा बढी फोन कलहरू रिसिभ भएका छन् । कहिलेकाहीँ छिमेकी र आफन्तबाट विदेशबाट आएका व्यक्तिबारे जानकारी दिनका लागि पनि फोनहरू आउने गर्छन् । प्रहरीले त्यसमा पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
लकडाउनको पालना गराउनकै लागि देशभरि कति प्रहरी परिचालन गरिएको छ ?
लकडाउनको पालना गराउने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा झन्डै ४७ हजार प्रहरी फिल्डमा खटिनुभएको छ । विभिन्न चोक, गल्ली, सडक र गाउँमा नियमित गस्ती गरिरहेका छौं । नेपाल–भारत सीमाबाट मानिसको आवागमन रोक्न विभिन्न सीमानाका र चेकप्वइन्टमा ४६ सयभन्दा धेरै प्रहरी कर्मचारीहरू खटिनुभएको छ । त्यस वरिपरी पैदल र सवारी गस्तीहरू बढाइएको छ ।
फिल्डमा रोगी, बिरामी र संक्रमितसँग समेत उठबस गर्नुपर्ने जोखिमबाट जोगिन प्रहरी आफैंले कस्तो सजगता अपनाएको छ ?
हामीले हदसम्मको उपाय अपनाएका छौं । स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धित हामीसँग उपलब्ध सामग्रीहरूको सदुपयोग गरेका छौं । मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहका छौं । फिल्ड र कार्यालयमा खटिने कर्मचारीलाई संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे दैनिक ब्रिफिङ गर्छौँ । कोरोना सम्बन्धित नयाँ सूचना वा तथ्यहरू पायौं भने त्यसबारे पनि जानकारी गराउँछौं । प्रहरी कार्यालयहरूमा कर्मचारी र आगन्तुकहरूलाई गेटबाट भित्र छिर्नासाथ सेनिटाइजर गराउने र कतिपय स्थानमा गाडीमार्फत सेनिटाइजर छर्कने सुविधा छ । सुरुका दिनभन्दा यो कार्य बढ्दो छ र हामी अलि बढी नै सचेत छौं ।
सुरु–सुरुमा लकडाउन उल्लंघन गर्नेमाथि प्रहरीले ज्यादति गरेको पनि देखियो नि ?
सुरु–सुरुमा यस्ता कुराहरू आएका थिए । सम्बन्धित प्रहरी साथीहरू अलिकति आवेगमा आएकाले केही यस्ता घटना भएका हुन सक्छन् । तर, अहिले यस्तो अवस्था छैन । हामीले देशैभरका साथीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेका छौं । जनताले पनि लकडाउन आफ्नै लागि हो भनेर बुझ्दै छन् । प्रहरी सधैं मानव अधिकारको सम्मान र नागरिकमैत्री व्यवहारमा जोड दिन्छ । यसका लागि बेलाबेला प्रहरीमा प्रशिक्षण, तालिम र ब्रिफिङ गर्ने काम भइरहेको हुन्छ । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा नागरिक र प्रहरी दुवै पक्ष सचेत भएर एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीसम्बन्धी अफवाह फैलाइने र चोरी–डकैतीका घटना बढ्ने कत्तिको छ ?
यस्ता कार्यहरू निकै भएका छन् । कसुरको आधारमा कुन ऐन आकर्षित हुन्छ त्यसकै आधारमा हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । विद्युतीय कसुर ऐन, साइबर क्राइमसम्बन्धी ऐन, मुलुकी उपराध संहिता, संक्रामक रोग ऐन आदिमार्फत कारबाही गरेका छौं । अपराध नियन्त्रणका लागि भनेर छुट्टै प्रहरी टोली खटाइएको छ । यस्ता घटनाहरू कतै भए–गरेको देखेमा तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न म सबैमा अनुरोध गर्छु ।
लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई अहिले के गर्नुभएको छ ?
बुधबारसम्म लकडाउनको उल्लंघन गर्ने ५७ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं । सवारी साधनहरू पनि नियन्त्रणमा लिएका छौं । अत्यावश्यक अवस्था हो भने उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, अनावश्यक रहेछ भने केही समय नियन्त्रणमा लिएर छाड्ने गरेका छौं । कतै कारबाही स्वरूप केही घन्टा उभ्याउने गरिएको छ । उल्लंघनसँगै अभ्रद व्यवहार गरेको खण्डमा भने कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको छ । उल्लंघन गर्नेको अवस्था हेरेर त्यहाँ खटिएको प्रहरी कमान्डरले निर्णय लिने गर्नुहुन्छ । लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई सम्झाई–बुझाई गरेपछि उहाँहरूले बुझ्ने भएकाले हामी अहिलेसम्म कडा कारबाहीमै उत्रनु परेको छैन ।
कस्ता व्यक्तिले लकडाउनको उल्लंघन गरिरहेका छन् ?
सबै मान्छे निस्किएका होलान्, म पनि चोकसम्म पुगेर त्यहाँ के भइरहेको रहेछ हेरेर आउनुपर्‍यो भन्ने भावनाले धेरैजसो घरबाहिर निस्किएको पाइएको छ । हामीले ड्रोनमार्फत काठमाडौंको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेका छौं । भिडियोले लकडाउनको समयमा काठमाडौं हेर्नमात्र होइन बाहिर कोही पनि निस्किएका रहेनछन् भन्ने म्यासेज पनि दिएको छ । प्रहरी साथीहरू दिनरात नभनी, भोकतिर्खा नभनी जनताका लागि खटिनुभएको छ । अरूले पनि यस कुरालाई बुझेर लकडाउन पालना गरेर प्रहरीलाई सहयोग गर्न मेरो अनुरोध छ ।
प्रहरीले अन्य निकायबाट के–कस्तो सहयोग पाएको छ ?
हामी सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सँगसँगै छौं । कोरोनाका शंकास्पद बिरामी भेटियो भने हामीले उसलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन सहयोग गरिरहेका छौं । उसको परिवार र सम्पर्कमा आएको व्यक्तिलाई क्यारेन्टाइनमा राख्ने काममा पनि प्रहरी सक्रिय छ । स्थानीय निकायहरूसँग हाम्रो राम्रो सहकार्य भइरहेको छ । राहत वितरणमा पनि हामीले सहयोग गरिहेका छौं । हरेक व्यक्ति, संघ–संस्था वा निकायसँग हाम्रो सहकार्य र सहयोग आदान–प्रदान भइरहेकै छ ।
प्रहरीले सबैभन्दा कठिनाइचाहिँ कुन कुरामा अनुभव गरेको छ ?
लकडाउन हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास हो । कोरोना भाइरस नै नयाँ संक्रमण हो । विश्व नै जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेका बेला हामीले पनि त्यसको सामना गर्नु परिरहेको छ । जनतालाई घरभित्रै परिवारसँग सुरक्षित साथ बस्ने अवसर छ । हामी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सडकमा खटिएका छौं । हाम्रो पनि परिवार छन् ।संक्रमणको डर हामीलाई पनि छ । तर, हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जनताको सुरक्षा हो । त्यसैले हामी यो जिम्मेवारी पूरा गर्दैछौँ । जनताले घरभित्रै बसेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको आलोचना धेरै हुन्छ । कोरोना महामारीले तपाईंहरूलाई त्यो आलोचना मेटाउने मौका पनि दिएको छ नि, होइन ?
अहिले प्रहरी प्रशासनप्रति जनताको प्रतिक्रियालाई लिएर हामी उत्साहित भएका छौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँहरूले प्रहरीको कामलाई लिएर निकै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ । नागरिकस्तरबाट डियुटीमा खटिएका प्रहरीलाई खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था भइरहेको छ । जनताले यतिबेला प्रहरी भनेको नागरिककै सुरक्षाका लागि खटिने निकाय हो भनेर बुझ्नुभएको छजस्तो मलाई लाग्छ । प्रहरी र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन दुवै पक्षको जिम्मेवारी र भूमिका उत्तिकै हुन्छ । प्रहरी हिजो पनि जनताको शत्रु थिएन र आज पनि होइन । प्रहरी र जनता सधैं हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।